कोलोन मेला र त्यहाँ प्राप्त गर्न कसरी | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > कोलोन मेला र त्यहाँ प्राप्त गर्न कसरी
को कोलोन महोत्सव निश्चित आफ्नो बाल्टिन सूची थप्दै लायक छ. 1.5 लाखौं जो लगभग हरेक वर्ष उपस्थित हुन्छन्, सहमत! पनि पाँचौं-सिजन रूपमा ज्ञात, यस संसारमा-प्रसिद्ध तिहार जीवनभरको अनुभव हुन निश्चित छ. को कोलोन मेला मात्र होइन मजा तर पनि सुपर सजिलो रेल द्वारा प्राप्त गर्न, मदत संग बचत रेल यहाँ छन् हाम्रो सुझाव द कोलोन चाडको लागि 2019 र रेल द्वारा त्यहाँ कसरी.
कोलोन महोत्सव के प्याक गर्न:
यो पोशाक जाने समय किनमेल. ड्रेसअप कसलाई मन पर्दैन? शैली ब्राजिलियन carnivals देखि बरु फरक छ. मेकअप र सेक्विन एक भारी खुराक संग थप "Prussian सैनिक" लाग्छ!
कोलोन मेला फैंसी पोशाक को एक सबै तिहार माथि छ, त्यसैले आफ्नो कल्पना प्रयोग! यो राम्रो उज्जवल.
बल र अन्य भित्री घटनाहरूको लागि, पातलो वेशभूषा सिफारिश गर्दै. के तपाईं साँच्चै गर्न चाहनुहुन्छ भने अनुभव यो पर्व, त्यसपछि तपाईं बाहिर जान आवश्यक! बस तल न्यानो केहि लगाउन सम्झना! वास्तविक कोलोन कार्निवल प्रशंसक द्वारा बन्द छैन मौसम! पछिल्लो मिनेट मा आइपुग्दा गर्ने पाहुनाहरूलाई मास्क पाउनुहुनेछ, वेशभूषा, र धेरै पसलहरुमा शहर को केन्द्र मा-अप बनाउन. अन्तिम उपायको रूपमा, एक सरल रातो कागज नाक तपाईं आवश्यक सबै छ. चाहनुहुन्छ केही पोशाक जानकारी.
कसरी कोलोन महोत्सव प्राप्त गर्न:
तपाईं कोलोन गरेको एक रेल समातेर चाहनुहुन्छ जाँदै हुनुहुन्छ मुख्य स्टेशन. यो पनि युरोप सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रेलवे हब मध्ये एक छ, त्यसैले तपाईं SaveATrain तपाईंलाई सुहाउने एक समय पाउन लड्न छैन.
तपाईं जर्मनी मा प्रमुख शहर र अन्य युरोपेली देशहरूमा चाँडै र आराम गर्ने कोलोन महोत्सव यात्रा गर्न सक्छन्: हरेक दिन, धेरै 1,300 रेल कोलोन र बीच रन गन्तव्यहरू जर्मनी भर र विदेश. सेवा को विशेषताहरू संग कोलोन जडान कि अन्तर्राष्ट्रिय उच्च गतिको रेल समावेश लन्डन, पेरिस, एम्स्टर्डम, र ब्रसेल्स. संग उच्च गतिको रेल सेवा फ्रैंकफर्ट गर्न, कोलन - Deutz रेलवे स्टेशन - को लागी दोस्रो टर्मिनल उच्च-गति आईसीई ट्रेनहरू कोलोन मा - र कोलोन / बोन हवाई अड्डा स्टेशन, कोलोन थप रेलवे लागि केन्द्रीय हब रूपमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका बढेको छ परिवहन.
कोलोन र वरपरको क्षेत्रमा स्थानीय सार्वजनिक परिवहन सेवा पनि उत्कृष्ट छ, सुविधा भूमिगत, ट्राम, र बस सेवाहरू कि कोलोन मा आफ्नो रहन समयमा इष्टतम गतिशीलता प्रदान गर्नेछ.
को द्वारा प्रदान जानकारी जर्मन रेल रेलवे कम्पनी मात्र होइन रेल कार्यक्रम समावेश, तर पनि ट्राम र बस कार्यक्रम प्लस समय आवश्यक जडान पैदल निकटतम स्टप वा स्टेशन पुग्न.
रटरडैम कोलोन गाडिहरु
एंटवर्प गर्न कोलोन गाडिहरु
कोलोन मेला मा Kolsch क्षेत्रीय भाषा
को बुझ्न “अनौठो” कोलोन मेला संस्कृति, तपाईं Kolsch क्षेत्रीय भाषा बाट केही विशिष्ट अभिव्यक्ति सिक्न आवश्यक छ. तिनीहरूले तपाईंलाई नयाँ हुनुहुन्छ भने, आफ्नो जर्मन कौशल शङ्कालु सुरु छैन – सबैभन्दा जर्मन या त तिनीहरूलाई थाहा छैन.
Fastelovend, वा: Fasteleer
मेला, पनि जानिन्छ “पाँचौं सिजन,” सबैभन्दा कोलोन को हृदयमा यस्तो विशेष स्थान धारण बासिन्दा तिनीहरूले यसको लागि धेरै शब्दहरू भनेर. हुनत मेला, वा “Fastelovend,” नोभेम्बर मा सुरु गर्न भने 11 प्रत्येक वर्ष, यस साँच्चै “ठूलो दिन” महिलाहरु सुरु’ रात, वा “Weiberfastnacht” बिहिबार अघि र ऐश बुधवार को सुरुतिर सम्म माथि चल्छ.
लक्जमबर्ग गर्न कोलोन गाडिहरु
Liege गर्न कोलोन गाडिहरु
ज्यूरिख गर्न कोलोन गाडिहरु
जेनेभा गर्न कोलोन गाडिहरु
Kolsch: यो तपाईं पिउन सक्नुहुन्छ मात्र भाषा हो. त्यो कोलोन मा चलिरहेको Gag छ, जहाँ क्षेत्रीय भाषा र गृहनगर उमालेर बनाउनु नै नाम साझेदारी. सामान्यतया अग्लो सेवा, पातलो चश्मा, कोलोन मेला समयमा यो कुनै भंगुर ग्लास सडक अनुमति छ मात्र रूपमा प्लास्टिक कप छ. तपाईं एक Brauhaus मा Kolsch लो गर्नुपर्छ, हुनत, सम्झनु: नगद ल्याउन. यो प्याक मा पेय टिकट किन्न मात्र तरिका हो पबहरूमा.
बर्लिन गर्न कोलोन गाडिहरु
Nuremberg गर्न कोलोन गाडिहरु
बन कोलोन गाडिहरु
श्टुटगार्ट कोलोन गाडिहरु गर्न
एक “Butzcher” ठूलो smooch छ. को कोलोन मेला पर्वहरू समयमा, चुम्बन प्राप्त आशा (“gebutzt,” वा सही हुन: “jebutz”) सामान्य भन्दा बढी. पूरा अपरिचित अपरिचित मा अहानिकारक pecks वितरण’ गाल, केही भिजेको Butzcher हुनत (मानक Kolsch मा, “Butz”) पनि सबै आफ्नो अनुहार माथि मेला मेकअप smudge सक्छ.
यो शब्द पबहरूमा बुझाउँछ, बारहरू, वा रेस्टुरेन्ट. लगभग सबै तिनीहरूलाई को कोलोन मेला मना मा भाग लिन. एक ठूलो नृत्य तल्ला सिर्जना र एक पंक्ति मा उत्सव को छ दिनको लागि सबै colorfully सजाने तिनीहरूले बाहिर फर्नीचर खाली. धेरै स्थानीय पबहरूमा मा, मात्र Kölsche संगीत प्ले छ (को Kölsch क्षेत्रीय भाषा मा गीतहरू). तपाईं अक्सर अगाडि 300-मीटर लामो लाइनहरू सम्म पाउनुहुनेछ परम्परागत पबहरूमा.
Weiberfastnacht के हो?
एका बिहानै, सडकमा वेशभूषा मा कोलोन महोत्सव मूर्ख संग भर्न. मा ठीक 11:11 a.m., सडक मेला आधिकारिक कोलोन र कोलोन गरेको मेला triumvirate को मेयर द्वारा खुलेको छ.
रोचक तथ्य: महिला (महिला)
मा 1824 Beuel मा, बन को एक भाग, धुलाईवाला समूहले आफ्नो कर्नेवल समिति गठन गर्‍यो. यो सबैका अरू Karneval मना हुँदा तिनीहरूले लाँड्री गरिरहेको थकित थिए देखिन्छ. तिनीहरूले टाउन हल stormed र शहर सरकार लियो. (अब सम्झना ... सरकारी खुल्लमखुल्ला caricatured गर्दा Karneval एक समय छ, र एक नक्कली सरकार निर्वाचित भएको छ. आज, यो महिला "को Beuel टाउन हल को तूफान" प्रत्यक्ष टेलिभिजनमा देखाइएको छ. केटी पावर!
कोलोन मेला तालिका:
मार्च 1: मेला शुक्रवार
यो दिन वास्तवमा बाँकी एक दिन छ. तर हामी पनि गम्भीर यो लिन थियो. धेरै सत्र र बल मा यो दिन साँझ ठाउँ लिन. यदि तपाईं चाहने हुनुहुन्छ त भोज, एक पाउन के तपाईं पक्का हुनेछु.
मार्च 2: मेला शनिबार
Kölsch एक कार्निभल ब्रन्च पछि बियर, त्यहाँ Neumarkt मा एक सैन्य परम्परा संग कार्निवल समाजमा को bivouac मा एक प्रदर्शन छ. बेलुका तपाईं भूत परेडमा जान सक्नुहुन्छ.
मार्च 3: मेला आइतवार
सुरु 11:11 a.m., स्कूल र छिमेकी parades मार्च शहर केन्द्र मार्फत, छिमेकी क्लब द्वारा मंचन costumed स्कूल समूह र मूल masquerades सुविधा.
सत्र को उच्च बिन्दु गुलाब सोमबार ठूलो परेड छ. को नाउहरु मा शहर मार्फत परेड गर्न सुरु 10 a.m. सहभागीहरू परेड मार्ग अस्तर को costumed भीडलाई गर्न चुंबन झटका.
मार्च 5: मेला मंगलवार
दिउँसो संग उपनगरहरुमा costumed revelers को समूह parades छन्. तेस पछि, को उत्सव मध्यरात सम्म मा जाने, को "Nubbel" भनिन्छ पराल आंकडा गाडे वा जलाइएको छ जब.
मार्च 6: खरानी बुधवार
बिहानी पख, क्याथोलिक चर्च जान प्राप्त गर्न एक क्रस को खरानी मा आफ्नो निधारमा को एक चिन्ह रूपमा पश्चात्ताप. त्यो साझ, यस वर्षको मेला सिजन परंपरागत माछा खाने मा निष्कर्षमा छ.
के हामीले तपाईंलाई कोलोन फेस्टिवलमा उपस्थित हुन विश्वस्त गरेका छौं? 2019, अझै? तपाईंको रेल टिकट लो सावा एक ट्रेन मिनेटमा कुनै अतिरिक्त बिना, pesky शुल्क! This means more money for Weetschaff ?
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र केवल एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन यो ब्लग पोस्ट गर्न, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcologne-festival%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#कोलोनफेस्तियल #कोलन europetravel तिहार longtrainjourneys trainjourney ट्राभलकोलोन traveltips
यूरोप मा शीर्ष योग retreats
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, यात्रा युरोप, युरोप मा योग